5-ta Website ee Ugu Muhiimsan ee Laga Helo Koorsooyin Waxbarasho oo Bilaash ah.. Mac’hadka Massachusetts Ayaa Ka Mid Ah – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA 5-ta Website ee Ugu Muhiimsan ee Laga Helo Koorsooyin Waxbarasho oo Bilaash...
5-ta Website ee Ugu Muhiimsan ee Laga Helo Koorsooyin Waxbarasho oo Bilaash ah.. Mac’hadka Massachusetts Ayaa Ka Mid Ah
Horumarka dhanka teknoolojiyadda iyo cilmiga ee laga gaaray maalmahan aan joognno in badan oo ka mid ah waxaad ka helaysaa internet-ka oo noqday goobaha cilmiga laga kasbado, qofku marxalad kasta cilmiga haka joogee, waxaad kordhin kartaa aqoontaada, waxaanad heli kartaa shahaadooyin ay bixinayaan jaamacadaha ugu qiimaha badan Adduunka.
Haddii ardaygu uu leeyaha qorshe iyo doonis luqadaha ajinabiga ah waa uu la tacaamuli karaa, waxa uu si sahlan ku helayaa dhowr website oo ajinabi ah oo lagu tiriyo ilaha aqoonta waxbarasho ee ugu wanaagsan adduunka.
1- Website-ka Coursera
Waxaa aasaasay Professor Andrew NG iyo Professor Daphne Koehler oo ka tirsan jaamacadda Stanford sanadkii 2012, waxa uu soo gudbiyaa koorsooyin waxbarasho oo habka MOOC (Massive Open Online Course), iyagoo kaashanaya tiro jaamacado ah iyo ururro waxbarasho.
Koorasyada ay bixiyaan waxaad ka helaysaa dhammaan culuumta kala duwan, waxaad ka helaysaa sciences, engineering, humanities, medicine, biology, social sciences, mathematics, finance, e-shopping, … luqada qaar sida, English, Spainish, French, Chinese, Arabic iyo Russian.
Shururada lagaa rabo waa inaan website-ka iska diiwaangeliso (Sing UP) si aad u hesho kooraasyo Online ah oo xilligii loogu talagay aad la socota.
2- Website-ka “Udemy”
Waa goob waxbarasho oo internet-ka ku diyaarsan waxaa la aasaasay sanadkii 2010, waxaa loogu talagalay dadka raba iney iska dhisaan xirfado kala duwan oo cusub oo takhasusyo kala duwan aad ka helayso sida; Administration, self-development, design, marketing, languages, software, health, fitness iyo science.
Casharrada waad ku cashan kartaa muddo 30 cisho ah gudahood marka aad is tiraahdo heerkii aad rabtay ma joogtin.
Website-kan sanadkii 2010 waxa uu ku bilaabay 400 oo koorso, hadda waxa uu bixiyaa 80, 000 oo koorso oo aad ka helaysaa sanadka 2018!.
Waxa lagaa rabaa waa inaand website-ka booqato oo account cusub aad ka furato, adigoo dooranaya koorsada aad rabto, luqadda aad wax ku baraneyso iyo mudada waxbarasho.
3- Website-ka EDX:
Waa website waxbarasho oo noociisu yahay (MOOC), waxaa sameeyay mac’hadka Massachusetts institute of Technology oo kaashana Harvard University sanadkii 2012, website-ka waxaad ka helaysaa kooroosyin bilaash ah oo dhinacyada kala duwan ee cilmiga ku saabsan, sida science, engineering, physics, chemistry.. luqadaha English, French, Spanish, Chinese iyo luqado kale.
Waxa lagaa doonayaa oo qura waa inaad website-ka booqato oo aad iska diiwaangeliso, si koorasyada xilliga kuu banana aad u ogaato, kuwa la sugayo iyo kuwa xilli kasta aad bilaaban karto, waxaase ugu dambeyn aad ka helaysa shahaado kuu caddeynaysa inaad kooraska si wanaagsan uga gudubtay.
4- Website-ka Khan Academy
Website-kan waxaa aasaasay Salman khan sanadkii 2006, si internet-ka looga helo aqoon ardayda ka garabsiisa iney wax ka bartaan meel kasta oo ay dunida ka joogaan.
Website-ka waa ku jira duruus gaagaaban oo ku tiirsan barta YouTube, waxaad ka helaysaa Xisaabta, biology, Chemistry, physics iyo taariikh, sidaas oo kale; tababarro u gaar ah macallimiinta habka ugu wanaagsan ee aqoonta loo gudbiyo.
5- Website-ka Lynda
Waa website waxbarasho waxaa sameysay shirkad waxbarasho si ay dadku Online wax ugu bartaan, website-ka waxaad ka helaysaa muqaallo Video waxbarasho oo noocyada cilmiga ee kala gaddisan laga sameeyay, website-kan koorasyada uu bixiyo qaarkood waa bilaash kuwo kalena xoogaa khidmad ah ayaad iska bixineysaa, waana website miisaankiisa waxbarasho ah dunida si aad ah ugu shaacsan.
Si kastaba, waxaan idinla wadaagnay si kooban website-yada ugu muhiimsan ee kaa caqab tiri kara baahiyahaaga waxbarasho ee dhanka internet-ka, kuwaas oo kaalin weyn ka qaata faafinta cilmiga ee dhinacyadiisa kala duwan oo u furan qof kasta oo danaya inuu waxbarto.
Previous articleXukuumadda Somaliland oo Magaalada Boorama ka Daah-furtay Mashaariic ku Kacaya Saddex Milyan oo Dollar
Next articleMACLUUMAAD DHAMAYSTIRAN OO KU SAABSAN ALAABTI XALAY CIRKA SOCOTAY oo lagu arkey gobolada soomaalida
Dal Horumar Ku Gaadhay Ka Faa’iidaysiga Wakhtiga!